Gazety Italiana Nandiso An’i Nelson Mandela Ho ‘Rain’ny Apartheid’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2013 1:18 GMT
Pikantsarin'ny lohatenin-gazety Italiana Il Gionale niantso an'i Nelson Mandela ho “rain'ny apartheid”.
Koa satria nahatratra ny faravodilanitry ny aterineto ny vaovao nahafatesan'ny filohan'i Afrika Atsimo teo aloha be mpitia Nelson Mandela, tamin'ny 5 Desambra 2013, nihazakazaka nanavao ny lohateniny, namoaka filazana manjò, nizara tantara, nizara sary sy fahatsiarovana ilay lehilahy izay nandao izao tontolo izao ho any amin'ny toerana tsaratsara kokoa, ny karazam-pamoaham-baovao amin'ny lafiny rehetra.
Ny sasany nahavita tsara kokoa noho ny hafa. Any Italia, izay miatrika fihenan-karama ireo efitry ny fanoratam-baovao ary voatsikera matetika ny kalitaon'ny fanaovan-gazety, maro ireo gazety mahasahana ny firenena namoaka lohatenim-baovaony tao amin'ny tranonkalany no milaza an'i Mandela ho “rain'ny apartheid”. Mandela anefa, ny tena marina, no fitaovana nandravana ny apartheid, rafitra mpanavakava-bolonkoditra tao Afrika Atsimo.
Ny lohateny moa dia nivoaka tamin'ny gazetin'ny antoko ankavanana lehibe indrindra ao amin'ny firenena Il Giornale sy tao amin'ny gazety Mattino sy Il Messaggero, izay nampirohondrohona tsikera an-tserasera.
Pikantsarin'ny gazety Italiana Il Messaggero milaza an'i Nelson Mandela ho “rain'ny apartheid”.
Pikantsarin'ny lohatenin-gazety Italiana Il Mattino milaza an'i Nelson Mandela ho “rain'ny apartheid”
Na dia voahitsy taoriana kelin'ny fivoahany aza ny fahadisoana, efa voadika tany amin'ny famoaham-baovao maro, tahaka ny tranonkalam-baovao Il Post ilay lohateny.
Ao amin'ny Twitter ny solontenan'i Il Giornale, ahitana an'i Andrea Cortellari, izay nanoratra ny lohateny, nifompona mafy mihitsy:
Fahadisoana tsy azo leferina. Ny nokasaina, dia ilay efa neritreretinareo, hoe “rain'ny ady amin'ny…” tsy ampy mihitsy ny fifonako.”
Maro ireo mamely azy sy ny gazety—izay voatsikera matetika noho ny fitongilanana ataony ho fanohanana ny Praiminisitra taloha Silvio Berlusconi. Ny mpisera Twitter iceheartp, ohatra, namaly ny fialantsiny:
@ACortellari Aza manahy, misy ny zavatra manala baraka kokoa amin'ny fiainana. Tahaka ny manoratra ao amin'ny Il Giornale.
Ny hafa indray nandray tsara ny fifonana, mihevitra fa fihetsika tsy mahazatra eo amin'ny mpanao gazety Italiana izany. Mandritra izany fotoana izany, milaza ny tonian'ny gazety Atoa Alessandro Sallusti, manontany ny mpanao gazety mavitrika Gad Lerner:
Ny Il Giornale an'i Sallusti nilaza an'i Mandela ho “rain'ny apartheid”, dia niala tsiny avy eo. Fa azo leferina ve ny tsy fahalalàn'ny mpanankarena?
Saingy niteraka resadresaka nivelatra kokoa momba ny fahasarotan'ny fitazonana ny kalitaon'ny fanaovan-gazety ao anatin'ny tsy fahampian'ny loharanom-baovao – ny fampihenana ny tetibola ary ny fampihenana ny isan'ny mpitati-baovao ilay fibolisarana hananana fampahafantarana avo lenta rehefa mamoaka vaovao ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy, mandresy lahatra ny sasany.
Tondroin'ny mpanao gazety Italiana Gianni Riotta tamin'ny fahadisoana lohateny ny porofon'ny faharatsian'ny raharaha manjo ny fanaovan-gazety Italiana:
Ny fankalazana an'i Nelson Mandela ho “rain'ny apartheid” nataon'ny gazety dia porofon'ny faharatsian'ny toe-draharahan'ny vondron'asa amin'izao fotoana izao